ने.क.पा. कास्कीका सेक्रेटरी बिजयलाई पत्रकार ओम हमालको चुनौती – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन १३, मंगलवार) २२:५५
आदरणीय कमरेड बिजय
सेक्रेटरी, ने.क.पा. कास्की
बिषय : स्पस्ट पार्न चुनौती दिइएको बारे।
उपर्युक्त सम्बन्धमा तपाइले मिति २०७६/११/१३ गते जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति पढें। तर त्यस प्रेस बिज्ञप्तिमा “केही अराजक तथा कथाकथित मिडियाहरु” भनि उल्लेख भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। साथै उपर्युक्त शब्दाबलीप्रती मेरो गम्भीर आपत्ति छ।
महोदय, तपाइले “केही अराजक तथा कथाकथित मिडियाहरु” भनेर कुन चाहि मिडियालाई किन भन्नुभएको हो ? स्पस्ट पार्नुहोस। तपाइको बुझाइमा अराजक र तथाकथित नहुन के कस्तो समाचार लेख्नु पर्ने हो ? आम नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा स्पस्ट पार्न म अनुरोध गर्दछु।
म तपाईलाइ प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अराजक र तथाकथित मिडिया नहुन के मिडियाले तपाइँ र तपाइँ सम्बन्धित पार्टीको गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्नु पर्ने हो ? कि तपाइँ र तपाइको पार्टीको भजन गाएर समाचार लेख्नु पर्ने हो ? कि बैकल्पिक राज्यसत्ता भएको दाबी गरेर न्याय माग्न आएका पिडित नेपाली जनताको उजुरी लिए जस्तो गर्ने र पीडकसंग गएर मोलमोलाई गरी
शोषित पिडित जनता र एकीकृत जनताको नाममा मोटो रकम असुली गरेको मिडियाले टुलुटुलु हेरिदिनु पर्ने हो ? के गर्नु पर्ने हो ? तपाइको जनसरकारको नाममा पत्रकारहरुलाई यस्तै आचारसंहिता लागु गरेर देखाउनुस।
एउटा जिम्मेवार पार्टीको यत्तिको पदमा पुगेको मानिस तपाइँ पक्कै पनि केही पढे लेखेको हुनुहुन्छ। तपाइँ पढेलेखेको मानिस नभए पनि पक्कै भिडियो त पक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सक्नुहुन्न भने पनि पक्कै कान सुन्नुहुन्छ। त्यो समाचारमा उल्लेख भएको भिडियो सामाग्री एक पटक हैन हजार, लाख पटक सुन्नुस, त्यो समाचारमा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले खोप्लाङ्गे जग्गा काण्डमा पैसा खायो भनेर कुनै पनि मिडियाले समाचार हालेका छैनन्। जुन मिडियाले समाचार हालेका छन् “खोप्लाङ्गे जग्गा काण्डमा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पैसा खाएकाकारण आफु मर्माहत भएको ” भनेर पिडित भनिएका र तपाइको जनसरकारमा न्याय पाउन उजुरी दिएका कृष्ण थापाको आवाज प्रशारण गरेका छन्। के तपाइको पार्टीले गरेको गल्तीको बिरोध नगरी जयजयकार गर्नुपर्ने हो ? न्याय दिने नाममा तपाइको पार्टीले गरेको थिचोमिचोको बारेमा जनतालाई सुसुचित गर्न नहुने हो ? कि के हो ? यदि त्यसो हो भने नेपाली मिडियाले गर्न सक्दैनन्। तपाइँहरुको खल्तीमा रहेका र तपाइहरुकै दानापानी खाइरहेका दलाल पत्रकारहरुलाई त्यसो गर्न भन्नुहोस।
महाशय, मिडिया के हो र कसरी समाचार लेखिन्छ भन्ने बारेमा राम्रोसंग अध्ययन गर्नुहोस र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहोस। तपाइको पार्टीमा न्याय माग्न आएका कृष्ण थापाले तपाइको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले खोप्लाङ्गे साहु पक्षधरबाट पैसा खाएको बताएका छन्। तपाइकै पार्टी निकट जनपत्रकार संगठन कास्कीका संयोजक रमाकान्त बास्तोला र सदस्य राजकुमार घिमिरेले सामाजिक संजालमा “पार्टीले कब्जा गरेको खोप्लाङ्गे साहुको जग्गा बिबाद मिलाउने नाममा पिडितलाई झन् पिडा हुने गरी कुनै गतिबिधि नगर्न सामाजिक संजालमा अभिव्यक्ति आएको छ। के ती अभिव्यक्ति मुद्दा मिलाउने नाममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको चलखेललाई इंगित गर्न लेखिएका हैनन् ? के तपाइँ र तपाइका पार्टी सदस्यहरु जनवाद भनेको जान्दैनन् र बुझ्दैनन् पनि के हो ? जनवाद भन्ने बुझेको भए त पार्टीभित्र कुरा राखुनु पर्थ्यो त। किन सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भए ?
खोप्लाङ्गे साहुको बिबादित जग्गा मिलाउने नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल (भिडियोमा हेर्नुस)
एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि पार्टीविरुद्ध प्रचार प्रसार हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा हैन। पार्टी भित्रका सुचना बाहिर आएपछि किन र के कसरी आए भनेर छानबिन गरिनु पर्ने हैन र ? पार्टी र संगठनको नाममा कसैले नाजायज काम पो गरिरहेको छ कि ? त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने हैन र ?
मिडियामा पिडितको प्रत्यक्ष आवाज र पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताको भनाइलाई उद्धृत गर्दै मिडियामा समाचार आउनु र त्यस बारे कुनै छानबिन नगरी तपाइँ जस्तो पार्टीको जिम्मेवार नेताले हचुवाका भरमा मिडियाबिरुद्ध खनिनुले के प्रमाणित गर्छ ? आफै विश्लेषण गर्नुस। मिडियामा समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेर पार्टीलाई सचेत गराएकोमा धन्यबाद दिनुपर्नेमा उल्टै मिडियालाई लाञ्छित गर्ने ? के यो जायज हो ? के तपाइलाई अलि कति पनि लाज लागेको छैन। के एकजोर लुगाले जिन्दगी कट्छ ?
ने.क.पा. कास्कीका सेक्रेटरी बिजयले जारी गरेको आपत्त्तिजनक बिज्ञप्ति
भन्दा दलाल संसदीय व्यवस्थाका बिरुद्ध बैकल्पिक राज्यसत्ता स्थापना गरेर युद्ध लडिरहेका छौं भन्ने अनि तिनै दलाल संसदीय व्यवस्थाका अभयबहरुसंग घांटी मिलाएर पिडितलाई झन् पिडित बनाउदा अलि कति पनि लाज शरम लाग्दैन ? भन्ने बेलामा जनयुद्धको पालादेखि कब्जा गरिएको जग्गा हो भन्ने अनि पिडितलाई न्याय दिने बेलामा पिडित नै मिडियामा आउने गरी उत्पीडन गर्ने ? अनि मिडियालाई नानाथरीका आरोप ? तपाइँहरुले भनेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरुसंग तपाइँका ठुला नेताले गठजोड गरेर पिडित भनिएका व्यक्तिलाई झन् उत्पिडनमा पारेको समाचार सार्वजनिक हुन लाग्दा हल्लुडे तालले मिडियालाई दोषारोपण ?
महाशय आफु शिशाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने मुर्ख्याइ नगर्नुस। जे हो, त्यो छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्नुस। केही दलाल, प्रहरी प्रशासनका मतियार र आत्मकेन्द्रित कुतत्वहरुको उक्साहटमा लागेर मिडियालाई लाञ्छित र दोषारोपण गर्ने धृष्टता र धुर्त्याई नगर्नुस। शोषित पिडित, गरीब किसान, मजदुर लगायत सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि जिउज्यान अर्पेर युद्ध मैदानमा उत्रनु भएको छ। आम जनता के भनिरहेका छन्। पार्टी, र तपाइका वरिपरि के कस्ता मान्छे छन् र उनीहरुको गतिबिधि कस्तो छ। ख्याल गर्नुस। फेरि अर्कालाई धापेको धरापमा आफै पर्नुहोला। क्रान्ति गर्छु भनेर मात्र हुँदैन। तपाइका सारथीहरू के कस्ता छन्, उनीहरुको क्रियाकलापले पनि क्रान्ति कता गैरहेको छ र कुन गतिमा गैरहेको छ , भन्ने संकेत गरेको हुन्छ। आफ्नो र अर्को कार्यकर्ता नचिन्ने, मनोरोगी-अर्धपागल आसेपासे भरौटे, दलाल र आर्थिक लम्पट केही पठ्मुर्ख कार्यकर्ताको उक्साहटमा लागेर क्रान्तिको उच्चतम बिन्दुमा पुग्न सकिन्न। क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने अठोट लिएकै हो भने पनि आफ्नो बोली व्यवहारलाई सुधार, सही र इमान्दार कार्यकर्ता चिन, सही योजना बनाएर कार्यान्बयन गर, आधारभूत वर्गलाई नभुल। जनतासंग मिठो बोल। कसैसंग बैरभाव नलेउ। बिना मुल्यमा जनतासंग कुनै चिज नलेउ। सत्य कुरा बोल। गल्ती सच्याउ।
अहिलेको जमानामा पनि थर्काएर, धम्काएर आक्रमण गरेर बहसमा लिन्छु भन्ने दिवा स्वप्न नदेख्नुस। तपाइँको धम्की, डरत्रासले कोही तर्सदैनन। तपाइले गोलि हानेर मान्छे मार्न सक्नुहुन्छ। तर उसको बिचार मार्न सक्नुहुन्न। अहिलेको जमानामा मिडियालाई उर्दी जारी गर्ने हैसियत तपाइलाई कसले दियो ? तपाइँ मलाई खोप्लाङ्गे साहु जग्गा बिबाद प्रकरणको प्रमाण पार्टीलाई बुझाउन निर्देशन दिने को ? तपाइँको निर्देशन नमानेपछि “केही अराजक तथा कथाकथित मिडिया’को संज्ञा ? के तपाइको पार्तेको मिडिया सम्बन्धि नीति यस्तै हो ? यदि यस्तै हो भने कुकुरलाई घ्यु नपचेको हो। इतिहास नभुल्नुस। बिगत फर्केर हेर्नुस।
तपाइँले खोप्लाङ्गे साहु जग्गा बिबाद प्रकरणको प्रमाण आफ्नो पार्टीमा नबुझाए नराम्रो हुने धम्की तपाइँको कार्यकर्तामार्फत दिनुभएको छ। के यो साँचो हो ? तपाइँलाई मैले ती प्रमाण किन बुझाउने ? कि वार्गेनिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर थप प्रमाण माग्नु भएको हो ? कि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको गलत धन्दाको पोल खुल्छ भनेर तर्सनु भएको हो ? के यस जनसंचार मिडिया प्रालिमा तपाइँ वा तपाइको पार्टीको लगानी छ ?
महाशय, तपाइले मलाई नराम्रो गर्ने भन्नु भएको छ, तपाइको बिज्ञप्तिमा त्यस बारेमा केही कुरा उल्लेख छैन। तपाइँ मलाई के कस्तो नराम्रो गर्नुहुन्छ ? गरेर देखाउनुस। न्याय दिलाउने नाममा वार्गेनिङ्ग गरेजस्तो नठान्नुस मिडियालाई। तपाइले गर्ने जुनसुकै नराम्रो कारवाहीको प्रतिबाद गर्न म प्रतिक्षा गरेर बसेको छु। चाहे तपाइँ मलाई भौतिक कारवाही नै गर्नुस, म त्यसको भण्डाफोर मेरो मिडियामार्फत गर्नेछु। तपाइको धम्कीले मेरो रौँ पनि हल्लिएको छैन। त्यस धम्कीले त मलाई झन् निडका साथ् पत्रकारिता गर्ने हिम्मत आएको छ। त्यस हिम्मत प्रदान गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
जनसंचार डट कम
(२०७६ फाल्गुन १३, मंगलवार) २२:५५ मा प्रकाशित